Dhaleeceeyn xafiiska shaqada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
kritik till arbetsförmedlingen
Dhaleeceeyn xafiiska shaqada
La daabacay måndag 24 maj 2010 kl 16.23
Qofka shaqaalaha xafiiska shaqada ee Arbetsförmedling wuxuu bishii shaqa geliyaa hal ruux, sida ku cad warbixin uu soo saaray ururka manaafacaadka ee Iswiidhishka.
Xafiiska shaqadu maaha mid hoowshiisa dar dar u fuliya, sida uu sheegay madaxa dhaqaalaha ee ururka Stefan Fölster. - Shaqaale walba ee ka hoowlgala heeyadda xafiiska shaqada, wuxuu bishii hoowlgeliyaa shakhsi shaqa la’aani asiibtay. Mana ahan xaalad ka wanaagsanaatay wixii laga soo bilaabo sannadkii 2003. Baaritaan ay waagaa ka sameeysay heyadda qaranka ee xisaab xirku. Stefan Fölster, mar ay wareeysi la yeelatay idaacadda wararka ee Ekot.
Sida ku cad warbixinta uu ururka nafaqada ee Iswiidhen sameeyay sannadkii 2009 ayuu shaqaale walba ee ka tirsan xafiiska shaqada wuxuu sannadkii u helaa shaqaale dadyoow gaarsiisan 9,4 ruux, middaasina oo macnaheedu tahay in ruuxii la shaqa geliyaba uu ku kaco dhaqaale gaarsiisan 60 000 oo koronka iswiidhishka ah.
Clas Ohlsson, ahna madaxa waaxda saadaalinta ee xafiiska shaqada ayaan sawirkaa la qabin. Isagoona sheegay in aanay hal shaqo oo keliya ahayne uu shaqaalaha xafiiska shaqadu ruuxiiba uu hoowlgeliyo laba ruux bishii, waana hoowl leh maalgelin wanaagsan.